आज दिनभरि नै पानी र हिउँ पर्ने, भाेलि पनि माैसम बदलीकाे सम्भावना ! – Khabarhouse
आज दिनभरि नै पानी र हिउँ पर्ने, भाेलि पनि माैसम बदलीकाे सम्भावना !
Khabar house | २४ पुष २०७६, बिहीबार ०५:३२ | Comments
काठमाण्डाै – पश्चिमी वायुकाे प्रभावले केही दिनदेखि देशभरिकै माैसम बदली भइरहेकाे छ। अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा पानी र हिउँ परिरहेको छ। अहिले पश्चिमको दिपायल, वीरेन्द्रनगर सहित पूर्वको ओखलढुङ्गा आसपासका क्षेत्रमा पानी र हिउँ परिरहेको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभरिकै मौसम बदली भइ धेरै ठाउँमा पानी र हिउँ परिरहेको मौसमविद् मन्जु बासीले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार यस कै प्रभावले बिहीबार दिनभरि नै पानी र हिउँ पर्दै रोकिने क्रम जारी रहने छ । शुक्रबार काठमाण्डाै सहित मध्यका थोरै र पश्चिमका धेरै ठाउँमा घाम लाग्ने तर मध्य क्षेत्रकै केही र पूर्वको मौसम भने आशिंक देखि सामान्य बदली हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै भनेको छ: देशका केही स्थानमा हल्का देखि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावनाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका अधिकांश स्थानमा मध्यमम देखि भारीसम्म हिमपात हुने सम्भावना रहेकाले, यसकै कारण जाडो बढ्ने हुनाले चिसोबाट जोगिने उपाय अपनाउनुका साथै यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु हुन सबैमा अनुरोध छ।
अहिले (बिहीबार बिहान) पनि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा एवं हिमपात जारी छ। पश्चिमी वायुका कारण बुधबार बिहान सुरु वर्षा र हिमपात अझै नरोकिएको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार अहिले देशभरका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात भइरहेको छ। यस्तै पश्चिमका केही स्थान र पूर्वका थोरै ठाउँमा अहिले पानी परिरहेको छ।
मंगलबार देखि सक्रिय पश्चिमी वायुको प्रभाव त्यही दिनदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा सुरु भएको थियो भने बुधबार बिहानदेखि देशभर मौसम बदली भई विभिन्न स्थानमा वर्षा तथा हिमपात सुरु भइरहेकाे हाे। ‘आज पनि मौसम खुल्ने सम्भावना छैन,’ मौसमविद् बासीले बिही बार बिहान भनिन्, ‘आज पनि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपात जारी नै रहने देखिएको छ।’